ဘလော့ဂ် - Surge Protection ကိရိယာ
Surge Protective Device (SPD) ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ [ ... ]
EV Charging Surge Protection EV charging - လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခဒီဇိုင်းပုံစံလျှပ်စစ်ယာဉ်အားသွင်းခြင်းသည်နိမ့်သောဝန်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် [ ... ]
Pluggable two-pole Type3T3 surge arrester DR M 2P IL = 25A DEHNrail modular Two-pole surge arrester တစ်ခုပါ ၀ င်သော [ ... ]
5G cell site အတွက် Surge protection (mobile base station) power supply ကိုကာကွယ်ခြင်း system ဖျူးများမှားယွင်းစွာလှည့်ဖျားခြင်းကိုရှောင်ပါ [ ... ]
DEHNvapDVA CSP 3P 100 S FM ရေကိုပြန်ဖြုတ်
DEHNvapDVA CSP 3P 100 S FM ရေ၊ အပိုင်းခွဲ။ 900 367 Prewired [ ... ]
DEHNguard ACI စနစ်သည်အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်သော DG M 275 ACI ကိုဖြုတ်တပ်သည်
DGM 275 ACI စနစ်ကိုအမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်မှုအတွက် - DEHNguard ACI DEHNguard M TT ACI 275 FM Modular [ ... ]
surge protective device ၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်မည်သူသည် Surge protection device (SPD) သည်သေးငယ်သည် [ ... ]
TUV, CB, CE မှအသိအမှတ်ပြုထားသော Surge protection device SPD
TUV, CB, CE ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားသော Surge protective device SPD - TUV Rheinland နှင့် LSP မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု [ ... ]
မြင့်တက်ကာကွယ်သည့်ကိရိယာ SPD အတွက် MOV သတ္တုအောက်ဆိုဒ် Varistor
ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာမြင့်မားသောအကာအကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာ SPD - LSP ပူးပေါင်းမှုအတွက် MOV သတ္တုအောက်ဆိုဒ် Varistor၊ [ ... ]
၂၃၀-၄၀၀ V ဗို့အားစနစ်များ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတွက် surge protection device SPD application များ၏ဥပမာများ
230-400 V စနစ်များတွင်မြင့်တက်သောအကာအကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာ SPD အသုံးချခြင်း၏ဥပမာများ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အဓိပ္ပါယ်များ EMC လျှပ်စီးကာကွယ်မှု - ဇုန် [ ... ]
အမျိုးမျိုးသောအမှတ်တံဆိပ် T1 + T2, Class B + C, Class I + II, Iimp 6.25kA, 12,5kA DC PV surge protection device SPD
အမျိုးမျိုးသောအမှတ်တံဆိပ် T1 + T2, Class B + C, Class I + II, Iimp 6.25kA, 12,5kA DC PV surge protection device SPD 1000Vdc 1200Vdc 1500Vdc [ ... ]
အမျိုးမျိုးသောအမှတ်တံဆိပ် T1 + T2, Class B + C၊ Class I + II, Iimp 12,5kA ကာကွယ်သောကိရိယာ SPD
အမျိုးမျိုးသောအမှတ်တံဆိပ် T1 + T2, Class B + C, Class I + II, Iimp 12,5kA အကာအကွယ်ပေးကိရိယာ SPD 1. Dehn (ဂျာမနီ) ၁) Dehn [ ... ]
အမျိုးမျိုးသောအမှတ်တံဆိပ် T1 + T2, Class B + C, Iimp 25kA ကာကွယ်မှုကိရိယာကို
အမျိုးမျိုးသောအမှတ်တံဆိပ် T1 + T2, Class B + C, Class I + II, Iimp 25kA ကာကွယ်သည့်ကိရိယာ SPD 1. Dehn (ဂျာမနီ) Dehn lightning [ ... ]
Duanwu ပွဲတော်ဟုလည်းလူသိများသော Dragon Boat Festival 2020 Dragon Boat Festival ကိုကျင်းပသည် [ ... ]
ပစ္စုပ္ပန်မြင့်တက်အကာအကွယ် device ကို SPD အတွက်ပူကိစ္စများအများအပြား
ပစ္စုပ္ပန်မြင့်တက်အကာအကွယ် device ကို SPD 1. ပူပြissuesနာများအများအပြားဟာမြင့်တက်အကာအကွယ်သည်စမ်းသပ် waveforms ၏အမျိုးအစားခွဲခြား [ ... ]
1 mm busbar အတွက် T2 + T40 AC Surge Protective Device SPD
T1 + T2 AC Surge Protective Device SPD ၄၀ မီလီမီတာ busbar OBO-Bettermann T40 + T1 AC Surge အကာအကွယ်ကိရိယာ SPD2[ ... ]
အခမဲ့ Download VDE 0675-6-11: 2002-12 Parafoudres basse-tension-Partie 11
အခမဲ့ Download VDE 0675-6-11: 2002-12 VDE 0675-6-11: 2002-12 Parafoudres basse-tension - Part 11: Parafoudres connectés aux systèmesဖြန့်ဖြူးအခြေစိုက်စခန်းတင်းမာမှု [ ... ]
မြင့်တက်အကာအကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာများအတွက် IEC 61643-11: 2011 စံကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် IEC 61643-11 IEC 61643-11 ဗို့အားနိမ့်။ မြင့်တက်သောအကာအကွယ်ပစ္စည်းများ - အပိုင်း ၁၁ - ဗို့အားနိမ့်စွမ်းအားဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမြင့်တက်ကာကွယ်သည့်ကိရိယာများ [ ... ]
photovoltaic စနစ်အတွက် 1500Vdc လျှောက်လွှာ
Photovoltaic စနစ်တွင် 1500Vdc အသုံးချခြင်းကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ခြင်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသူများ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြစ်သည်။ [ ... ]
လျှပ်စီးလက်ရှိမြင့်တက်ခြင်းနှင့် overvoltage ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
Lightning current surge နှင့် overvoltage protection လေထုမှထွက်သော overvoltage voltage overvoltage အဓိပ္ပာယ် overvoltage (system တစ်ခုအတွင်း) မည်သည့် voltage မှမဆို [ ... ]
အနိမ့်ဗို့အားစနစ်များ၏ Overvoltage ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
ဆရာဝန် Peter Hasse ရေးသားသော 'Voltage စနစ်များကို overvoltage protection' မှစာအုပ်အား 'Overvoltage protection of [ ... ]
မြင့်တက်အကာအကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာ SPDs အချို့ပြissuesနာများအကြောင်းပြောဆိုပါ
တရုတ်နိုင်ငံမှ Dehn, OBO နှင့် Citel ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဒီဇိုင်းကို အခြေခံ၍ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုကာကွယ်သည့် SPDs များ။ သို့သော်နည်းပညာနှင့်အလေ့အကျင့်များတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူရင့်ကျက်သောကုန်ပစ္စည်းများစုဆောင်းနေသည့် Dehn, Phoenix, Raycap, OBO, Citel, Hakel၊ ဤအပြောင်းအလဲများသည်အချို့သောဖက်ရှင်ပြောင်းလဲမှု၊ ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုပြုလုပ်ရုံသာမကဘဲတည်ဆောက်ပုံနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။ သို့သော်တရုတ် SPD စက်ရုံများကိုကြည့်ပါ၊ ၎င်းတို့သည် OBO စတိုင်ကဲ့သို့ခေတ်နောက်ကျနေသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်
multi-pulses အကာအကွယ်ပေးတဲ့ကိရိယာ MSPD ကိုမြင့်တက်စေတယ်
Multi- ပဲမျိုးစုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး device ကိုမြင့်တက် MSPD2PfG 2634 - multi- ပဲမျိုးစုံအဘို့အပိုဆောင်းစမ်းသပ်ဗို့အားအနိမ့်ချိတ်ဆက် Surge အကာအကွယ် devices များ [ ... ]
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုကန့်သတ်ခြင်းများကိုပိုမိုသိရှိလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုကောင်းမွန်သောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်မှာထင်ရှားလာသည်။ လေစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုသည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ LSP တွင်လေရဟတ်တာဘိုင်များအသုံးပြုရန်အတွက်ရရှိနိုင်သောမြင့်တက်သောကာကွယ်မှုထုတ်ကုန်များအစုံလိုက်ရှိသည်။
T1 + T2 B + C PV ကာကွယ်သည့်ကိရိယာ DC SPD မှမြင့်တက်လာသည်
ကုန်ပစ္စည်းအသစ်စတင်ခြင်း - T1 + T2 B + C PV မြင့်မားသောအကာအကွယ်ပေးကိရိယာ DC SPD 1500Vdc, combiner box အတွက် 1000Vdc [ ... ]
5G နည်းပညာအတွက်ဝယ်လိုအားတိုးလာခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုမြင့်မားသောထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်းနှင့်ကွန်ယက်ရရှိနိုင်မှုကိုလိုအပ်သည်။ ဆဲလ်ဆိုက်တည်နေရာအသစ်များကိုဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အဆက်မပြတ်တီထွင်လျှက်ရှိသည် - လက်ရှိကွန်ယက်အခြေခံအဆောက်အအုံကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ခြင်း ဆဲလ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ရမည်ဟူသောအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်စရာမရှိပါ။ မည်သူမျှသူတို့၏ပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ထားသည့်စစ်ဆင်ရေးကိုအန္တာရာယ်ပြုရန်ဆန္ဒရှိနိုင်သည်
လျှပ်စစ်ရွေ့လျားမှုနှင့် EV အားသွင်းစက်နှင့်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်မြင့်မားသောကာကွယ်မှု
လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များတိုးပွားလာခြင်းနှင့်“ မြန်သောအားသွင်းခြင်း” နည်းပညာအသစ်ကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လုံခြုံသောအားသွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံများလိုအပ်လာသည်။ နှစ် ဦး စလုံးအထိခိုက်မခံသောအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်အမှန်တကယ်အားသွင်းကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမော်တော်ယာဉ်များနှစ်မျိုးလုံးကို overvoltages မှကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
Ethernet Surge Protector, PoE မှကာကွယ်သောကိရိယာ
Ethernet Surge Protector, PoE surge protection device parameters များကိုစစ်ဆေးခြင်း (အပိုင်း ၁) - ရှုပ်ထွေးမှု၏အခြေခံသဘောတရား ၁ ။ [ ... ]
မီးရထားနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရေဒီယိုကာကွယ်ခြင်းကိရိယာများနှင့်ဗို့အားကန့်သတ်သည့်ကိရိယာများအဘယ်ကြောင့်ကာကွယ်ရမည်နည်း။ ရထားလမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး [ ... ]
PCB တပ်ဆင်ရန် AC & PV Surge protection device SPD
PCB mounting အတွက် AC & PV Surge Protection Device SPD သည် Surge Protection Device SPD အတွက် PCB သို့ Adaptable Base နှင့်တပ်ဆင်နိုင်သည် [ ... ]
BS EN 62305-4: 2011 မီးလျှံမှကာကွယ်မှု
BS EN 62305-4: 2011 လျှပ်စစ်ပြတ်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း - အပိုင်း ၄ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအတွင်းရှိလျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်စနစ်များ။ ဤသည်ဥရောပစံ EN 4-62305 အစားထိုး:4+ corr.Nov.2006 ။
BS EN 62305-3: 2011 မီးလျှံမှကာကွယ်မှု
BS EN 62305-3: 2011 လျှပ်စီးများမှကာကွယ်ခြင်း - အပိုင်း ၃ အဆောက်အအုံများနှင့်သက်ရှိအန္တရာယ်များအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးခြင်းဤဗြိတိသျှစံနှုန်းသည်အင်္ဂလန် EN 3-62305:3၏အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်သည်။
BS EN 62305-1: 2011 လျှပ်စစ်ပြတ်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း - အပိုင်း ၁ အထွေထွေအခြေခံမူများ
BS EN 62305-1: 2011 လျှပ်စစ်ပြတ်ခြင်းမှအကာအကွယ် - အပိုင်း ၁ အထွေထွေအခြေခံမူများ၊ ဤဥရောပစံနှုန်းသည် EN 1-62305: 1 + corr.Nov.2006 ။
BS EN 61643-21: 2001 + A2: 2013 Low-voltage မြင့်တက်ကာကွယ်သောကိရိယာများ
EN 61643-21: 2001 + A2: 2013 Low-voltage မြင့်တက်ကာကွယ်သောကိရိယာများ။ ၎င်းကို IEC 61643-21: 2000 မှရရှိခဲ့ပြီး Corrigendum မတ်လ 2001 နှင့်ပြင်ဆင်ချက် ၂: ၂၀၁၂ တို့ပါဝင်သည်။ ရုပ်သိမ်းလိုက်သော BS EN 2-2012: 61643 + A21: 2001 ကိုအစားထိုးသည်။
အိန္ဒိယဖောက်သည်မြင့်မားသောကာကွယ်မှုများအတွက် LSP သို့သွားရောက်
အိန္ဒိယဖောက်သည်များကပါဝါကာကွယ်မှုထုတ်ကုန်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ထုတ်လွှင့်ရေးတာဝါတိုင်များနှင့်မီးရထားလမ်းများတွင်မြင့်မားသောကာကွယ်မှုအတွက် LSP သို့လာရောက်သည်။ LSP သည်အိန္ဒိယမှ guests ည့်သည်နှစ် ဦး ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၁ တွင်တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီးသူတို့၏ကုမ္ပဏီသည်စွမ်းအင်အေးစက်ကိရိယာများ၊ အလိုအလျောက်နှင့်စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချသည်။
BS EN 61643-11-2012 + A11: 2018 low-voltage မြင့်တက်ကာကွယ်သောကိရိယာများ
BS EN 61643-11-2012 + A11: 2018 နိမ့်ဗို့အားမြင့်မားသောအကာအကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာများ - အပိုင်း ၁၁ ဗို့အားနိမ့်သောစွမ်းအင်စနစ်များနှင့်ဆက်စပ်သည့်မြင့်တက်သောအကာအကွယ်ပစ္စည်းများ။ BS [ ... ]
EN 50526-1-2012 & EN 50526-2-2014, မီးရထားလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများ - Fixed installation - DC surge arresters နှင့် voltage limiting devices
BS EN 61643-31: 2019 နိမ့်ဗို့အားမြင့်မားသောအကာအကွယ်ပစ္စည်းများ
BS EN 61643-31: 2019 ဗို့အားနိမ့်။ မြင့်တက်သောအကာအကွယ်ပစ္စည်းများ - အပိုင်း ၃၁ photovoltaic တပ်ဆင်မှုအတွက် SPD များအတွက်လိုအပ်ချက်များနှင့်စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ [ ... ]
AC&DC သည် SPD ထုတ်လုပ်သည့်မြင့်မားသောအကာအကွယ်ပေးစက်
AC&DC မြင့်တက်သောအကာအကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာ SPD ထုတ်လုပ်မှု - ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်ဥရောပအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အရည်အသွေးတူသည်၊ ယခုတွင်သင်သည်အရန်သိမ်းဆည်းရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုရှိသည်။
လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်များ၊ IET Wiring Regulation, 18th Edition, BS 7671: 2018
IET Wiring Regulations ၏ ၁၈ ကြိမ်မြောက် Edition ကိုရောက်ရှိခြင်းသည်လျှပ်စစ်ကန်ထရိုက်တာများအတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်ကိုထပ်မံပုံဖော်သည်။ Surge protection devices (SPDs) များသည်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်မှကာကွယ်ရန်နှင့်တပ်ဆင်မှု၏ဝါယာကြိုးအခြေခံအဆောက်အအုံအားဗို့အားပိုများစေခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
မြင့်တက်အကာအကွယ် device ကို SPD ထုတ်လုပ်သူကိုရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လို
China AC & DC & PV surge protective device SPD ထုတ်လုပ်သူကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ တရုတ်ထံမှပလပ်ပေါက်နိုင်သော surge protective device ကိုဝယ်ယူရန်အရေးကြီးသောအချက် ၈ ချက်
DD CLC-TS 50539-12: 2010 Low-voltage surge protective devices များ
ဤနည်းပညာသတ်မှတ်ချက်ကို Technical Committee CENELEC TC 37A၊ Low voltage surge protection devices မှပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ မူကြမ်း၏စာသားကိုတရားဝင်မဲပေးပြီး ၂၀၀၉-၁၀-၃၀ ရက်နေ့တွင် CENELEC မှ CLC / TS 50539-12 တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။
PD CLC TS 50539-12: 2013 Low-voltage မြင့်တက်ကာကွယ်သောကိရိယာများ
ဤနည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်သည် PV installation များနှင့်ချိတ်ဆက်မည့် SPD များရွေးချယ်ခြင်း၊ တည်နေရာ၊ ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းအတွက်အခြေခံမူများကိုဖော်ပြသည်။ dc ဘက်မှ 1500 V dc အထိသတ်မှတ်ထားပြီး ac ဘက်မှရှိလျှင် 1000 V rms 50 Hz အထိသတ်မှတ်သည်။
IEC 60364-7-712: 2017 အထူးတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်နေရာများအတွက်လိုအပ်ချက်များ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလျှပ်စစ်နည်းပညာကော်မရှင် (IEC) သည်“ နိမ့်သောလျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုအပိုင်း - ၇-၇၁၂ ။ အထူးတပ်ဆင်မှုများသို့မဟုတ်နေရာများအတွက်လိုအပ်ချက်များ - နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic (PV) power supply systems” အတွက် IEC 60364-7-712: 2017 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
UL 1449 Surge Protective Devices များအတွက် 4th Edition စံ
အသစ်ထုတ်ပေးထားသော UL 1449 Surge Protection Devices for Standard နှင့် AC surge protection devices (SPDs) အားလုံးအတွက် ဦး စားပေးစံဖြစ်သည်။ စံသတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းယာယီဗို့အားထပ်ခါတလဲလဲကန့်သတ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော surge protection devices များ (SPDs) နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လိုအပ်ချက်များ။ 50V ထက်မပိုသော 60 သို့မဟုတ် 1000 Hz ပါဝါဆားကစ်ပေါ်တွင်
BS EN IEC Surge Protective Device (SPD) အတွက်အခမဲ့ download လုပ်ပါ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရေးအတွက်ထုတ်လုပ်သူများသည်ဤထုတ်ကုန်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများကိုလိုက်နာရမည်။
၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉ တွင်ကိုရီးယားဖောက်သည်သည် LSP သို့သွားရောက်ခဲ့သည်
၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉ တွင်ကိုရီးယားဖောက်သည်သည် LSP သို့ရောက်ရှိခဲ့သည် [ ... ]
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအမှတ်တံဆိပ်သုံးခုဖြစ်သော LSP DEHN နှင့် Cross Reference [ ... ]
နာမည်ကြီး SPDs အမှတ်တံဆိပ်
နာမည်ကြီး SPD တံဆိပ်များသည် TVSS Dehn Phoenix Contact OBO မှကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် [ ... ]
Led Street Lightings အတွက် Surge Protection Device သည် LED နည်းပညာအတွက်အဓိကအားဖြင့်အချက် ၄ ချက်ဖြစ်သောထိရောက်မှု၊ ဘက်စုံသုံးခြင်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်သက်တမ်းရှည်ခြင်းတို့အတွက်အလင်းရည်ညွှန်းနည်းပညာဖြစ်လာသည်။ ဤအကျိုးကျေးဇူးများရှိသော်လည်းနည်းပညာတွင်အားနည်းချက်များစွာရှိသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအကောင်အထည်ဖော်မှုကုန်ကျစရိတ် (ကန ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု) နှင့်အတွင်းပိုင်းအီလက်ထရွန်းနစ် (LED မှန်ဘီလူးနှင့်ယာဉ်မောင်းများ)၊ ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးရိုးရာအလင်းအရင်းအမြစ်များထက်အလွန်အကျွံအားကိုအထိခိုက်မခံခြင်း။
IEC 61643-21-2012 စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ
EN 61643-11 & IEC 61643-21: 2012 Low voltage surge protective devices များ - အပိုင်း ၂၁ ။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အချက်ပြကွန်ယက်များသို့ချိတ်ဆက်ထားသောမြင့်မားသောကာကွယ်သည့်ကိရိယာများ - စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ၏သတ္တုအစိတ်အပိုင်း (ဆိုလိုသည်မှာသက်ရှိအစိတ်အပိုင်းမှသီးခြားထားသည့်သတ္တုကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်း) ဖြစ်သောလျှပ်ကာပစ္စည်းပျက်စီးပြီးနောက်သို့မဟုတ်အခြားကိစ္စများတွင် conductor နှင့် grounding တို့ကယုံကြည်စိတ်ချစွာချိတ်ဆက်ထားသောအားသွင်းနိုင်သည့် protective wiring method ကိုယ်ခန္ဓာ grounding protection system သည် phase နှင့် neutral လိုင်းများသာရှိသည်။
Lightning ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းသည်ခေတ်မီလျှပ်စစ်နှင့်အခြားနည်းပညာများမှတစ်ဆင့်လျှပ်စီးကြောင်းများကိုကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Lightning protection ပစ္စည်းများကို power light ကာကွယ်မှု၊ power protection socket, antenna feeder protection, signal lightning protection, lightning protection testing tools၊ တိုင်းတာခြင်းနှင့် control system lightning protection, earth pole protection တို့ကိုခွဲခြားနိုင်သည်။
Surge Protection Device SPD ဖြစ်သည်
Surge Protection Device SPD ကို arrester လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ surge protectors တွေဟာအလျင်အမြန် switch လုပ်တာပါ။ surge protector ကိုလည်း voltage range တစ်ခုအတွင်းမှာ activate လုပ်ပါတယ်။ activate လုပ်ပြီးပါက surge protector ၏ဖိနှိပ်မှုအစိတ်အပိုင်းသည် high-impedance state မှပြတ်တောက်သွားပြီး L pole သည် low-resistance state သို့ပြောင်းသွားလိမ့်မည်။
Ethernet ကျော်ပါဝါ (PoE) Surge Protector
Power over Ethernet (PoE) Surge Protector model ND-CAT 6A / EA သည်အထူးသဖြင့် Ethernet LAN မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ထားသောကိရိယာများကို network cable များမှတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်လာသည့်လျှပ်စီးများမှကာကွယ်ရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
SPD (Surge Protective Device) ၏ရှေ့ပိုင်းတွင် SCB (Surge Circuit Breaker) ကိုအဘယ်ကြောင့်တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
SCB (Surge Circuit Breaker) သည်သီးသန့် backup protector သည် power supply အားကာကွယ်ပေးသော SPD (Lightning Protection Device) အတွက်ပရိုဂရမ်အရန်ကာကွယ်ပေးသည်။
မြင့်မားသောအကာအကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာများ SPDs စံနှုန်းများနှင့်စာပေ DIN VDE 0100-100: 2009-06 Low-voltage လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်း - အပိုင်း ၁ - အခြေခံမူများ၊ အကဲဖြတ်ခြင်း [ ... ]
Surge protection device ၏အခြေခံဗဟုသုတ
Surge protection device ၏အခြေခံအသိပညာ Surge protection ကို nightclub တွင် bouncer အဖြစ်စဉ်းစားပါ။ သူသာခွင့်ပြုလိမ့်မည် [ ... ]
Surge Protection - မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Surge Protection - မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ Surge Protector ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ အဆိုပါမြင့်တက်ကာကွယ် [ ... ]
၁၇ ရာစုတွင်ဖရန့်ကလင်သည်လျှပ်စီးတံဆိပ်ကိုတီထွင်ပြီးကတည်းကနှင့် LSP ကသတိပေးသည် [ ... ]
စက်မှုဆိုင်ရာအသုံးချမှုများအတွက်မြင့်မားသောကာကွယ်ခြင်းကိရိယာများစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအသုံးချမှုများတွင်အမျိုးမျိုးသောကိရိယာများပါ ၀ င်သည် [ ... ]
BS EN IEC 62305 လျှပ်စီးကာကွယ်မှုစံ BS EN / IEC 62305 အလင်းကာကွယ်မှုအတွက်စံကိုမူလတွင်ဖော်ပြခဲ့သည် [ ... ]
အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ photovoltaic စနစ်များအတွက်လျှပ်စီးနှင့်ကာကွယ်မှု
ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ photovoltaic စနစ်များအတွက်လျှပ်ကူးခြင်းနှင့်မြင့်မားသောကာကွယ်မှုယခုအချိန်တွင် PV စနစ်များကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ အချက်ကိုအခြေခံသည် [ ... ]
LV လျှပ်စီးလက်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုအတွက် Arresters မြင့်တက်
လျှပ်စီးကိုဆန့်ကျင် LV Surge Arresters လျှပ်စီးဆန့်ကျင် Surge ဖမ်းဆီးသူများတပ်ဆင်ခြင်းဖော်ပြချက် site ကိုပါဝင်သည် [ ... ]
မြင့်တက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာများ (spds) နှင့် RCD
Surge protection devices (SPDs) နှင့် RCD တို့ကိုအတူတကွအသုံးပြုခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် Surge protection devices (SPDs) နှင့် RCDs [ ... ]
Photovoltaic အသုံးပြုရန်အတွက် Surge Protection Devices ကိုရွေးချယ်ပါ
Photovoltaic အသုံးချမှုများအတွက် Surge Protection Devices ကိုရွေးချယ်ခြင်းအထွေထွေအယူအဆ Photovoltaic (PV) ၏ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်မှုကိုရရှိရန် [ ... ]
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်အတွက် Photovoltaic (PV) စက်ရုံများမှလျှပ်ကူးပစ္စည်းစနစ်များမှမြင့်မားသောကာကွယ်မှုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လွှတ်မှုမှကြီးမားသောအန္တရာယ်ရှိသည် [ ... ]
Surge Protection Devices များကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ရေးကွန်ယက်များတွင်အသုံးပြုသည်
Surge Protection Devices ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ရေးကွန်ယက်များတွင်အသုံးပြုသည် [ ... ]
လျှပ်စီးလက်ခြင်းနှင့်မြင့်တက်သောကာကွယ်မှုပစ္စည်းများအကျဉ်းချုပ်နည်းပညာဆိုင်ရာတပ်ဆင်မှုများနှင့်စနစ်များကိုစီစဉ်ထားသောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး [ ... ]
Surge Protection စက်၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Surge Protection Device ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် (AC နှင့် DC Power, DATALINE, COAXIAL, GAS TUBES) Surge Protection Device (သို့မဟုတ် surge suppressor သို့မဟုတ် [ ... ]
စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေးစနစ် (TN-C, TN-S, TN-CS, TT, IT) [ ... ]
IEC 61643-31-2018 စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ
IEC 61643-31-2018 photovoltaic အတွက်လိုအပ်ချက်များနှင့်စမ်းသပ်နည်းများ IEC 61643-31: 2018 Low-voltage မြင့်တက်ကာကွယ်သည့်ကိရိယာများ - အပိုင်း ၃၁ ။ လိုအပ်ချက်များ [ ... ]
ဒေတာစင်တာများမှမြင့်မားသောကာကွယ်မှုဒေတာစင်တာများတွင်စိတ်ချရသောမြင့်တက်ကာကွယ်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမိုဘိုင်းပစ္စည်းများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်လိုအပ်ချက် [ ... ]
လူတိုင်းသိသည့်အတိုင်းကာကွယ်သည့်ကိရိယာများမှမြင့်တက်လာခြင်းသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအကာအကွယ်ပေးသောကိရိယာများ (SPD) သည်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုအလွန်အကျွံအားများခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကာကွယ်သည်။ [ ... ]
PV တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် DC Surge Protection Devices
PV တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် DC Surge Protection Devices Solar Panel PV Combiner Box DC Surge Protective Device [ ... ]
PV Surge Protection Device Solar Panel DC Surge Protection Device SPD Photovoltaic တပ်ဆင်ခြင်းများသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏အဓိကအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ [ ... ]
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ရပြီ!အဘယ်သူမျှမ